Eli linqaku elihlaziywe ngokupheleleyo kwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada ngezifundo abazinika abafundi.
Ubunjineli lukhetho olubalulekileyo lokufunda, intsimi sele ikho ixesha elide kwaye ibone ukuguqulwa okuninzi njengoko umhlaba uguquka. Ubunjineli buyafuneka phantse kuwo onke amabakala okufunda kodwa kuxhomekeke kuhlobo, ilizwe lanamhlanje lazisa ezinye iindlela zobunjineli ezinegalelo ikakhulu kwihlabathi liphela.
Ukufundela ubunjineli kufuna umsebenzi onzima, umdla, kunye nenzondelelo, kunye neziko elifanelekileyo lokufunda liya kongeza ngokulinganayo kwimpumelelo yakho njengomfundi wobunjineli ukufezekisa injongo yakho, ukukuxhobisa ngezakhono ezifanelekileyo kunye nolwazi lokujongana neenjineli zehlabathi.
ICanada yaziwa njengenye yezona ndawo zibalaseleyo zokufunda emhlabeni, amaziko alapha anikezela ngemfundo esemgangathweni kuyo nayiphi na inkalo yesifundo kwaye ngenxa yotyalo-mali oluninzi kwezemfundo, amaziko aseCanada anendawo zophando ngobugcisa bokunceda abafundi phucula kwizifundo ezifanelekileyo kwicandelo labo lokufunda.
Isatifikethi esifunyenwe kumaziko aseCanada samkelwe kwilizwe liphela bobabini ngabasebenzi nangamanye amaziko. Ke, njengomfundi wobunjineli ogqibe ukufunda eCanada, isatifikethi sakho siya kwamkelwa naphina emhlabeni.
Kulabo bafuna izifundiswa zobunjineli zaseCanada, eli nqaku likwabonisa inani lezifundo ezibonelelwa ngokuthe ngqo zizikolo zobunjineli zabafakizicelo kunye nabafundi.
Sidwelise ngaphambili inani leefayile ze- Izifundo zesidanga sokuqala eCanada ivulekele phantse onke amabakala okufunda ecaleni kwawo i-postgraduate scholarships. Kukho inani le Inkxaso mali exhaswa ngokupheleleyo eCanada Esikubhalileyo koku ziyafumaneka kubafundi bamanye amazwe kunye nabaseCanada.
Ufuna ukufunda ubunjineli eCanada kodwa udidekile malunga nesikolo osikhethayo?
Eli nqaku liza kukunceda ucime ukudideka kuloo nto kwaye sikunike neenkcukacha zokufunda kwisikolo ngasinye. Ndize noluhlu oluhlaziywe ngokupheleleyo lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada kunye neenkcukacha zazo zokufunda ezinokukunceda ekuxhaseni izifundo zakho, ukuhlawula iindleko zakho zokuhlala okanye ukubonelela ngezixhobo zakho zesikolo.
Kwakhona qaphela ukuba ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zaseCanada nazo ziyavuma abafundi bamanye amazwe kwaye banokufaka izicelo kwaye bakulungele ukufumana izifundiswa.
Ngaphandle kobunjineli, kukwakho ubugcisa bobugcisa eCanada kunye nezinye Izifundo zonyango ezifumaneka eCanada kubafundi besayensi abathatha izifundo kwicandelo lezonyango.
1 Izikolo eziBalaseleyo zezoBunjineli eCanada
1.1 IYunivesithi yaseToronto, iFakhalthi yeSayensi eSebenzisiweyo kunye nezoBunjineli
1.1.1 Amabhaso amaScholarships anikezelwa yiYunivesithi yaseToronto, iFakhalthi yeSayensi eSebenzisiweyo kunye nezoBunjineli
1.2 IYunivesithi yaseBritish Columbia yobunjineli
1.2.1 I-Award Award Scholarships i-University of British Columbia yobunjineli
1.3 IYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yezoBunjineli
1.3.1 Ulwabiwo-mali olunikezelwa yiYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yoBunjineli
1.4 IYunivesithi yaseWaterloo, iFakhalthi yezoBunjineli
1.4.1 Ulwabiwo-mali olunikezelwa yiYunivesithi yaseWaterloo, iFakhalthi yoBunjineli
1.5 IYunivesithi yase-Alberta, iFakhalthi yezoBunjineli
1.5.1 Ubungcali beeScholarships ezinikezelwa yiYunivesithi yaseAlberta, iCandelo loBunjineli
1.5.2 I ngcebiso
Izikolo eziBalaseleyo zezoBunjineli eCanada
Emva kophando olunzulu, ndakwazi ukuqokelela ezona zikolo zibalaseleyo ze-5 eCanada ngolwazi lwazo olufumanekayo lokufunda.
IYunivesithi yaseToronto, iFakhalthi yeSayensi eSebenzisiweyo kunye nezoBunjineli
IYunivesithi yaseBritish Columbia yobunjineli
IYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yezoBunjineli
Apha ngezantsi, ndidwelise onke amathuba afumanekayo okufunda kwizikolo zobunjineli zaseCanada ezichazwe apha ngasentla.
IYunivesithi yaseToronto yeFakhalthi yeSayensi eSebenzisiweyo kunye nezoBunjineli yenye yezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli eCanada kwaye, iphinda kabini njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada. Isikolo sidume ngegalelo laso eliphambili kwihlabathi kwizinto eziphambili zobomi ezinjengempilo yabantu, amanzi, uhlalutyo lwedatha, njl.
I-faculty ivelisa abanye babaphandi abagqwesileyo kunye nabafundi ngoqeqesho olungqongqo, amathuba angenakuthelekiswa nanto exesha langaphandle kunye namava obuchwephesha nawo aseta abafundi ukuba babe sisizukulwana esilandelayo seenkokheli kunye nabenzi botshintsho ukuvula amandla angenamda kwikamva.
Eli liziko lokuba bonke abafundi abanokuba nobunjineli kufuneka babe yinxalenye yokunceda ukukhupha ezi zinto zinokubakho kunye nendlela yokulawula impumelelo yabo. Ukunceda abafundi, nangaphezulu, eli ziko linothotho lwezibonelelo zokufunda ezinokuthi zenziwe ngabafundi ukufaka isicelo sokubanceda nokubakhuthaza kwizifundo zabo.
IYunivesithi yaseToronto ngokusebenzisa izinga lokwamkelwa eliphantsi ngokubanzi ikwa negalelo kwezinye zezona zidumileyo iikhosi online kwi Canada.
Kwirekhodi, bangaphezulu kwama-20 iikhosi ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiDyunivesithi yaseToronto kubafundi bamazwe ngamazwe.
The IYunivesithi yaseToronto iqhubeka nenkqubo yemfundo ikwafumaneka phantse kungekho mfuneko yemfundo yokwamkelwa.
Amabhaso amaScholarships anikezelwa yiYunivesithi yaseToronto, iFakhalthi yeSayensi eSebenzisiweyo kunye nezoBunjineli
Ezi zifundo zinikezelwa qho ngonyaka kubafundi abanenjongo yokufunda isifundo sobunjineli kwiDyunivesithi yaseToronto kwaye babonakalise intsebenzo ebalaseleyo yemfundo kwaye bayabandakanyeka nakwizinto ezenziwa emva kwexesha lokufunda. Zisixhenxe kwezi mfundo kwaye zizo;
I-Faculty ye-Applied Science kunye noBunjineli bokungeniswa kweeScholarships: Le nkxaso-mali yeyabemi kunye neyamazwe aphesheya kwaye ayidingi kufakwa isicelo, abafundi baqwalaselwa ngokuzenzekelayo xa besebenzisa i-faculty. Imali yokufunda yi- $ 7,500
I-Faculty ye-Applied Science & Engineering Ukungeniswa kweeMbasa: Abafakizicelo abaqwalaselweyo ngeli bhaso kufuneka babe ngumhlali wase-Ontario kwaye linikezelwa ngokusekwe kwimfundo esemagqabini kunye nakwimfuno yemali. Isifundi esixabisa i-10,000 yeedola.
IYunivesithi yaseCanada yobunjineli bamanye amazwe iScholarship: Esi sisibonelelo esivuselelekayo sokunikezelwa kwabafundi bamanye amazwe abafaka izicelo zokufunda kwicandelo lobunjineli, ayifuni sicelo njengoko abafundi bekhethwa ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwimfundo yabo. I-scholarship ixabise i-35,000 yeedola kwiminyaka emine yokufunda.
IYunivesithi yaseKhanada yokuNgena kweeSayensi zaBafundi beMveli: Esi sisibonelelo esivuselelekayo esivulelekileyo kubafakizicelo bemveli kwaye sigubungela ukufundwa kwasekhaya kunye neminyaka emine yenkqubo yokufunda yomfundi.
I-Hatch yobunjineli bee-Aboriginal Scholarship: le nkxaso-mali inikezelwa kubafundi bemveli abangenayo ngokusekwe kwizifundo zabo, yi- $ 8,000 yeminyaka emine yokufunda komfundi kwaye iyavuseleleka.
UStanley Timoshek Scholarship kubuNjineli: le mfundo ivulelekile kumfundi ongenayo ovela ePoland ngokusekwe kwintsebenzo esemagqabini yezifundo.
J. Dick noRuth A. Sprenger Scholarship yaBafundi abaDala kubuNjineli: le nkxaso-mali isekwe kwimfundo esemgangathweni yomfundi oqolileyo ohlala eCanada okanye ummi osisigxina waseCanada oqala ukuba ngumfundi wokuqala kunyaka wobunjineli boMbane okanye weKhompyutha. Abantu abagqibileyo ukufunda ngokusisigxina okanye bebekade bekwimeko yokusebenza banokukhetha ukuphumelela isifundi kwaye sinokuphinda senziwe kwiminyaka emi-2-4.
Ubunjineli be-UBC sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada kunye necandelo lobuchule obuphezulu elizaliswe ngoonjingalwazi kunye nabaphandi abaziwayo abazinikele kwindlela yokufundisa ebandakanyekayo, enamava, eyahlukileyo eyenza iinjineli ze-UBC zime ngokwahlukileyo kwisiseko esomeleleyo esiza kwakhiwa kuso ikhondo elinomdla nelinomvuzo.
Ngenjongo ephambili yokudala nokusebenzisa ulwazi lotshintsho oluhle eluntwini, abafundi abajolise ekuqhubekeni nezifundo kwi-UBC Yobunjineli baba phakathi kwaba profesa bangakholelekiyo kwaye abaphandi abakumgangatho wehlabathi bafunde kwaye bakhuthazwe kubo, kwaye babe yinxalenye yoluntu Ukulawula utshintsho oluhle eluntwini.
IYunivesithi yaseBritish Columbia ikwadweliswe phakathi kwezikolo eCanada ezibonelelayo izinto zokunceda abafundi kwaye izifundiswa ezipheleleyo kubafundi baseCanada nakwamanye amazwe.
I-Award Award Scholarships i-University of British Columbia yobunjineli
Ubunjineli be-UBC bunika uthotho lwezifundo, iibhasari, kunye namabhaso minyaka le kubafundi abanenjongo yokulandela ikhosi yobunjineli. Izifundo, iibhasari kunye namabhaso aphumelele ngokusekwe kwimfundo yomfundi, indibaniselwano yokuphumelela ngokugqwesileyo kwizifundo kunye neemfuno zezemali, ubunkokeli okanye impumelelo yenkonzo yoluntu.
Ubunjineli be-UBC bufikelela kwi-8 eyahlukeneyo yokufunda enikezelwa minyaka le ukuxhasa kunye nokukhuthaza abafundi. Ezi mbasa zezi;
UChristopher Spencer Memorial Scholarship kubuNjineli: le mfundo ivulelekile kubafundi abatsha abafuna ukufunda ikhosi yobunjineli kwaye ixabisa i $ 6,700.
UDean Henry Gunning Award kwiNjineli: eli bhaso lelomfundi wasekhaya osebenze ngokugqwesileyo kwaye wabonisa iinkonzo zobunkokeli, engena kwi-Bachelor ye-Applied Science program ngokuthe ngqo evela kwisikolo esiphakamileyo. Isixa semali esiyi- $ 1,200.
U-Elizabeth noLeslie Gould Ukungena kwiScholarship yoBunjineli: le nkxaso-mali inikezelwa kumfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya ngokusebenza ngokugqwesileyo kwizifundo kwaye ubonakalisile ubunkokeli obunokuthi bangene kunyaka wabo wokuqala weBachelor yeNkqubo yeSayensi eSebenzisiweyo kwiNjineli. Imali yokufunda yi- $ 2,500 kwaye iyavuselelwa iminyaka emine yokufunda ayifuni sicelo njengoko abafundi beqwalaselwa ngokuzenzekelayo.
Umgubo wabasetyhini kwiBhaso lokuNgena kweNjineli: Eli bhaso livulelekile kumfundi wasekhaya wasetyhini ongena kwinkqubo yobunjineli ngokuthe ngqo kwisikolo esiphakamileyo kwaye ubonakalisile ukugqwesa kwizifundo kunye neenkonzo zobunkokeli. Isixa semali esiyi- $ 10,000.
Ubungcali boBunjineli boBuchule: le nkxaso-mali inikezelwa kubafundi abasebenza ngokugqwesileyo kwizifundo nakwinkokeli engena ngokuthe ngqo ukusuka kwisikolo esiphakamileyo ukuya kwinkqubo yobunjineli. Isixa semali yokufunda siyi- $ 5,000 kwaye sinokuphinda senziwe de kube sekupheleni kwenkqubo yokufunda yomfundi.
Ubunjineli beMechanical Class ka-1967 iBhaso lokuNgena kwabaFundi kwiNjineli: eli bhaso ngokusekwe kwimfundo efanelekileyo, ekuhlaleni, nakwiinkonzo zobunkokeli. Eli bhaso lokungena lixabisa i-9,250 yeedola, enikezelwa kumfundi wemveli ongena kwezobunjineli e-UBC nokuba kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye egqithisela kwenye iyunivesithi eCanada.
Abasetyhini kwiNjineli yokuNgena kweeNjineli: le mfundo yeyomfundi wasekhaya wasetyhini ofuna ukwenza isidanga sokuqala kwezobunjineli, ukugqwesa kwizifundo, kunye nemisebenzi yobunkokeli iyafuneka ukufumana le mfundo. Inani elipheleleyo le-scholarship yi- $ 10,000
I-Yves kunye neCynthia Bled Women kwiNjineli yokuNgena kweeNjineli: le nkxaso-mali inikezelwa kubafundi ababhinqileyo basekhaya, ngokusebenza ngokugqwesa kwizifundo kwaye abaye bathatha inxaxheba kwimisebenzi yobunkokeli, abafuna ukufundela isidanga sokuqala kwezobunjineli.
Abaviwa banokuthi bangene ngokuthe ngqo kwisikolo esiphakamileyo okanye badlulisele kwelinye iziko lesibini. Isifundi siyahlaziywa kwaye iyonke iyimali eyi- $ 3,500.
IYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yezoBunjineli sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada ezibonelela ngegraduate kunye nezidanga kwiikhosi zobunjineli. Eliziko lizinikele ekufundiseni abafundi ukuba benze njani ukhetho olunengqiqo, ukuba nezinto ezintsha, ukurhweba, kunye nokwamkela ezona ndlela zilungileyo ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokufunda eziya kuthi zibe luncedo kwihlabathi ngoku nakwixesha elizayo.
Ukunceda nokukhuthaza abafundi abajolise ekufundeni ubunjineli kwiYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yezoBunjineli ibonelela ngezifundo kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali qho ngonyaka kubafundi.
IYunivesithi ikwaboniswa kuluhlu lwe Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada.
Ulwabiwo-mali olunikezelwa yiYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yoBunjineli
I-Scholarship kunye noncedo lwezezimali zinikezelwa minyaka le kubafundi abanezakhono ezizodwa kwizifundo nakwinkalo yobunkokeli okanye abafundi abaneemfuno zemali abafuna ukulandela isidanga sobuchwephesha bobunjineli.
Ezi zifundo zezi;
Ukungena kweeScholarships: Le ngxowa-mali ayifuni ukuba abaviwa bafake izicelo njengoko bekhethwe ngexesha lokungeniswa, banikezelwa le ngxowa-mali ngenxa yokugqwesa kwezemfundo. Isixa semali yokufunda siphakathi kwesixa se- $ 3,000 ukuya kwi- $ 10,000 ngonyaka kwaye inokuphinda ihlaziywe kude kube sekupheleni kwenkqubo yeminyaka emine yomfundi.
Izifundo zangaphakathi: Inikezelwa ngeOfisi yemicimbi yabafundi ngelixa umfundi ebhalisiwe kwiinkqubo zobunjineli. Izifundo zangaphakathi ziyafumaneka kubafundi abagqwesileyo ababenegalelo kwiyunivesithi kwaye bagqibe ubuncinci unyaka omnye wenkqubo ye-BEng.
Imali yokufunda iyi- $ 10,000 kwaye inokuphinda ihlaziywe iminyaka emi-3
Iinkxaso-mali Neemali-mboleko Zokufunda: Le yeyabafundi abanengxaki yemali, banokufaka izicelo zebhasari kaMcGill kunye nemali mboleko yokuqhubela phambili izifundo zabo kwaye babuyisele kamva kwixesha ekuvunyelwene ngalo ngenzala efanelekileyo.
IYunivesithi yaseWaterloo, iFakhalthi yezoBunjineli
IYunivesithi yaseWaterloo liziko eliphambili kwinto entsha kunye nendawo yokufunda ephefumlelweyo ejongene ngakumbi nophando oluxhasa uluntu, amashishini kunye nemibutho. Abafundi baxhotyiswe ngezakhono zophando, ulwazi, kunye nobuchule obuza kubonisa umsebenzi wabo kwihlabathi kwaye banegalelo nangayiphi na indlela abanokuyenza.
Ubungcali beziko lobunjineli sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli eCanada kwaye sesinye sezona zikhulu nazo, ezibophelele ekukhokeleni imfundo yobunjineli, uphando, ubuchule, kunye nezinto ezintsha.
IYunivesithi yaseWaterloo, iFakhalthi yezoBunjineli njengenye yezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli eCanada ibonelela ngezifundo kubafundi abafuna ukufunda inkqubo yobunjineli kwaye ezinye zeengxowa-mali azidingi sicelo.
IYunivesithi yaseWaterloo ikwaboniswa njengenye ye iiyunivesithi eziphambili eCanada zokufunda ngobunjineli bobume.
Ulwabiwo-mali olunikezelwa yiYunivesithi yaseWaterloo, iFakhalthi yoBunjineli
INkokeli yeSchulich Scholarship: Le ngxowa-mali iyasebenza kwaye inikwa abagqatswa basekhaya ngokugqwesa kwizifundo, ukubonakalisa ubunkokeli, kunye neshishini elinengqondo kwezamashishini abaphumeleleyo ababhalise kwisayensi, itekhnoloji, ubunjineli, okanye inkqubo yezibalo. Isifundi sixabisa isixa esipheleleyo se- $ 100,000.
Olunye uqeqesho ngokubanzi ngaphandle kwesicelo lubandakanya:
UMongameli weScholarship yoKwahlula
Ukungena kweeScholarships ezixhaswe yiAlumni kunye nabaxhasi
Ezi zifundo zonke zinempawu ezifanayo, azisebenzi kwaye zinikwa abafundi abenza isidanga nakweliphi na icandelo lokufunda ukuze abafundi bezobunjineli bakwazi ukuzifumana. Banikezelwa ngokusekwe kwimisebenzi ebalaseleyo yokufunda kunye nemisebenzi yobunkokeli.
IYunivesithi yase-Alberta, iFakhalthi yezoBunjineli
Ngokwamanqanaba ehlabathi, iYunivesithi yaseAlberta iphakathi kwezona yunivesithi ziphambili ze-5 zaseCanada, kwaye iyunivesithi inezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli eCanada. Yaziwa njengeyunivesithi ebanzi yemfundo kunye nophando enika uluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo kunye nezobugcisa zabafundi ukuba bazisebenzise kwaye babe zizinto ebezisoloko zifuna ukuba zizilumko kwizifundo.
IYunivesithi yase-Alberta, iFakhalthi yoBunjineli inezixhobo zophando ezikumgangatho wehlabathi zabafundi zokusebenzisa ulwazi abalufundayo kumagumbi okufundela kwiimeko zobomi bokwenyani ezenza ukuba ibe lelinye lamaziko aphambili kuphando lobunjineli eCanada.
Njengenye yezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada, isikolo sinceda kwaye sikhuthaze abafundi abajolise ekufundeni ubunjineli kwiYunivesithi yase-Alberta ngothotho lwezifundo ezixabisa izigidi zeedola ezaphuke zaziindidi ezahlukeneyo.
Ubungcali beeScholarships ezinikezelwa yiYunivesithi yaseAlberta, iCandelo loBunjineli
Amabhaso okungena: la ngamabhaso abafundi abangena kwinkqubo yobunjineli yonyaka wokuqala besuka kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye kukho amakhulu kolu hlobo lwamabhaso aqala kwi- $ 1,000 ukuya kwi- $ 50, 000. Abafundi abakumgangatho ophakamileyo wemfundo kunye nobunkokheli obunokubakho bakhetha ukuphumelela le mfundo.
Amabhaso aBafundi abaQhubekayo: eli bhaso lelabafundi abagqibe ubuncinci unyaka omnye kwi-BEng, abagqatswa abakhethiweyo kufuneka babe nokusebenza ngokuqaqambileyo kwimiboniso kunye nobunkokeli. Ixabiso lokufunda lifikelela kwi- $ 10,000.
Amabhaso angaphandle kunye neBhasari ngeSicelo: Inkqubo yokuwongwa kunye nenkqubo yokwenza isicelo iyahluka ukusuka kwibhaso ukuya kwibhaso kwaye kwezinye iimeko kunokuba kubanzi.
Apho unoluhlu olupheleleyo lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada ngezifundo zokufunda kwaye ukuze ufaneleke kwizifundo zokufunda kufuneka usebenze nzima ezifundweni.
Olu luhlu luhlanganisiweyo lwezona zikolo zi-5 zibalaseleyo zobunjineli eCanada ngezifundo ziya kukunceda ekukhetheni iziko eliya kuthi lincedise ekubumbeni ubunjineli bakho kunye nobuchule bokuyila ikhondo lomsebenzi oya kuthi wena, uluntu kunye nehlabathi liphela nizuze kulo.
Iikholeji ezi-13 eziGqwesileyo zobuNjineli eMelika ngeeScholarship
Iinkqubo ezi-2 zeNjineli yobuNjineli boNyaka
Scholarships yaseCanada Scholarships epheleleyo Masters Scholarship I-PhD Scholarships Uphando kunye noBambiswano Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Isifundo eCanada | Ukwamkelwa | Ulwabiwo-mali | Imirhumo | Izibonelelo neMali mboleko Ngaphantsi kweeSchoolships
Izikolo zobunjineli ezifikelelekayo eCanadaIzikolo eziBalaseleyo zoBunjineli eCanada ngeeScholarshipUbunjineli bobuchwephesha baseCanadaIzikolo zobunjineli ezingabizi kakhulu eCanadaizifundiswa zobunjineli eCanadaIzikolo zobunjineli eCanadaezona zikolo zidumileyo zobunjineli eCanadaIzikolo zobunjineli zesidanga sokuqala eCanadaIzikolo zobunjineli zesidanga sokuqala eCanada
Post Previous:Izikolo zobugcisa ze-10 eCanada ngeeScholarships
Okulandelayo Post:13 Exceptional Reasons why Education is Important
Pingback: I-10 ephezulu yeSayensi kwi-Biology Jobs